I-Oli yasimahla yeFryer ▷ Izimvo kunye neZiqhotsi zoMoya eziBalaseleyo ngo-2022
Ifryer yasimahla yeoyile
IPhilips HD9220 / 20
I-Tefal Fry Uyolo
I-Tefal Actifry 2 ku-1
ICecofry Compact ekhawulezayo
Inkosazana iAerofryer XL
Moulinex Easy Qhotsa
I-Oil Free Fryer: Iimbono kunye nokuba yeyiphi enokuThenga
Ngaba uyafuna ukuphucula ukutya kwakho ngaphandle kokuyeka ukutya okuqhotsiweyo okuthandayo? Iifriji ezishushu zomoya lukhetho olulungileyo kwaye usanda kufika kwiwebhu yereferensi malunga nazo.
Ungaphoswa zizikhokelo zethu ngezona modeli zibalaseleyo, siyakuxelela ukuba zisebenza njani, izimvo zabo sele bezamile kwaye bangazithenga phi. awona maxabiso aphezulu kwi-Intanethi eSpain.
Zeziphi ezingcono ngoku?
IiFryers ezithelekisayo ngaphandle kweOyile
Ungayikhetha njani kwaye ujonge ntoni?
Isebenza Njani iFryer yaMahala?
Ixabiso leFryers zoMoya ezishushu
Sele bekwimarike iminyaka embalwa ngoku, kodwa basebaninzi abantu abathandabuzayo ngesi sixhobo sincinci. Ukuba ulapha, kungenxa yokuba unomdla kubo, kodwa awuqinisekanga sithini isiphumo abasinika sona kwaye ukuba sifanelekile kwaye zifanelekile kwikhaya lakho. Qhubeka ufunda kwaye fumana olona lwazi lupheleleyo nokungakhethi buso
Sithanda ukuphucula kwaye siyazi ukuba sikuncedile, ngoko nawaphi na amagqabantshintshi amkelekile, nokuba abalulekile, siphe umzuzu 🙂
➤ Uthelekiso lwezona Fryer ziNganeoyile
Thelekisa ngokukhawuleza nangokulula ukubona owona mahluko ubalulekileyo kwaye wenze isigqibo sokuba yeyiphi ilungele iimfuno zekhaya lakho.
HD9216 / 20
I-Actifry 2 kwi-1 XL
Cecofry Deluxe Rapid
Iindawo ezi-2 zokupheka
➤ Sesiphi Esona Siqhotsisi siNganamafutha kwiMarike?
Ukugqiba ukuba yeyiphi eyona nto ingcono ayikho kuthi, ekubeni umsebenzisi ngamnye unezinto eziphambili oko kumisela ukhetho.
Esinokuthi sikuxelele kona kukuba iimodeli zigqame ngaphezu kwazo zonke ezinye, nokuba kukusebenza kwazo, ngexabiso eliphantsi okanye ukuba nelona xabiso likhulu lemali.
Siza kubona kuqala ezona zinto zibalulekileyo kwezona zixhobo zingcono kwimarike kwaye ngaphantsi kokukhetha nge ezinye iimodeli ezikhethiweyo.
▷ Philips Airfryer HD9280 / 90
Ixabiso Philips HD9220 / 20
I-XL air fryer yosapho: kunye ne-6,2 l isitya kunye ne-1,2 kg yebhasikithi enkulu ukuya kwii-5 iinxalenye - iinkqubo ezi-7 zokupheka kwangaphambili kunye nesikrini sokuchukumisa
Indlela esempilweni yokupheka: ukutya okunencasa nokunesondlo ukuya kuthi ga kwi-90% yamanqatha amancinci- Qhotsa, bhaka, uqhotse, uqhotse kwaye uphinde ufudumeze kunye nenkokeli yehlabathi kwiziqhoyi zomoya**
Iiresiphi ezenzelwe wena: Khuphela i-app yethu ye-NutriU ukuze ufumane iiresiphi ezikhuthazayo zokuphila ngendlela enempilo elungelelaniswe nezinto ozikhethayo-zilandele inyathelo ngenyathelo ngokulula.
UCrispy ngaphandle, ithenda ngaphakathi: Itekhnoloji yoMoya oKhawulezayo enoyilo olulodwa olumile okwenkwenkwezi yenza ukujikelezwa komoya oshushu ngokugqibeleleyo kokutya okunencasa kunye nethenda.
Ukucoca ngaphandle kwemigudu: Ifriji enezitya zokuhlamba izitya ezikhutshwayo-ezikhuselekileyo
✅ Iimpawu zeAirfryer eFanelekileyo
Umthamo weelitha ze-6.2
2000 W amandla
Itekhnoloji yomoya ekhawulezayo
Ixesha le-Analog kunye noLawulo lobushushu
Iindawo zokucoca izitya
Ingxelo elungileyo evela kubathengi
Uphawu olwaziwayo kunye namava
Nangona kukho iimodeli ezininzi ezithengisa kakuhle kakhulu, enye yeenkokeli zentengiso kwiimpawu ezaziwayo yi IPhilips HD9280 / 90 ukusuka kusapho lweAirfryer.
Esi sixhobo, ukongeza kwiinkcukacha zesiqhelo zezi zixhobo, sinakho Itekhnoloji yoMoya oKhawulezayo. Itekhnoloji ye-philips enelungelo elilodwa lomenzi wechiza eyilelwe ukufumana ukutya okuphekwe ngokulinganayo ngeoli encinci kakhulu.
▷ I-Tefal ActiFry 2 ku-1
I-Tefal Actifry 2 kwixabiso eli-1
I-2-in-1 ekhethekileyo ye-fryer yomoya oshushu Indawo ezimbini zokupheka ukulungiselela isidlo esipheleleyo ngexesha elinye; ibandakanya ipleyiti eyongezelelweyo yegrill ngqo kwimveliso
Ukujikeleza komoya oshushu kunye nengalo ejikelezayo ye-stirrer Ukupheka ngokuthambileyo ukutya okuqhotsiweyo ngolawulo oluzenzekelayo lobushushu, kwenza ukuba kuqhotswe ngamafutha aphantsi; ubushushu obulungelelanisiweyo ukulungiselela iziphumo ezichanekileyo zokupheka Ukusuka kwi-80 ukuya kuma-220° C
Iiprogram ezili-9 ezizenzekelayo ngokuthe ngqo kwisikrini kunye nomphezulu wokuchukumisa omkhulu; ulibazisekile ukuqala ukuya kwiiyure ezili-9 kwaye ugcine umsebenzi oshushu
Ukuyeka ngokuzenzekelayo xa uvula isiciko, onke amacandelo (isitya se-ActiFry, i-grill, i-lid) iyasuswa kwaye i-dishwasher ikhuselekile; isibali-xesha ngethoni yomqondiso
Yintoni esebhokisini Tefal YV9708 ActiFry Genius XL 2in1, isitya esisuswayo kunye nepleyiti yegrill, isiciko esisuswayo, icephe lokulinganisa, incwadi yomsebenzisi
✅ Iimbalasane zeTefal Actifry
Umthamo omkhulu we-1.5 Kg: 4/5 Ukukhonza
1400 W amandla
Iindawo ezimbini zokupheka
Digital Programmer kunye LCD
4 Iimenyu ezinkqayayo
Inokulungiswa iminyaka eyi-10
Okwangoku ifryer yomoya nge iindawo zokupheka ezimbini ethengiswa kakhulu yi I-Tefal Actifry 2 ku-1. Enye yeempawu ezibonakala kakhulu kulo mzekelo kukuba kunokwenzeka ukupheka ukutya ezimbini ngaxeshanye.
Ikwabandakanya ukujikeleza kwe-scoop esusa ukutya ngokuzenzekelayo kwaye uphephe ukwenza oko ngesandla. Ixabiso layo liphezulu noko, nangona ihlala ineentengiso ezinezaphulelo ezilungileyo.
▷ Cecotec Turbo Cecofry 4D
Cecofry 4D Ixabiso
I-Innovative dietetic fryer enenkqubo yokupheka evumela ukupheka ukusuka phezulu, ukusuka ezantsi okanye ngaxeshanye ukusuka phezulu nangaphantsi, ujikeleze ukutya kwe-360º kunye nokusabalalisa ubushushu ngokulinganayo.
I-Automatic fryer epheka ngenkani nayiphi na ioyile eneenkqubo ezisi-8 ezisetyenzisiweyo ukwenza kube lula ukuyisebenzisa kunye nokuqonda: sauté, toast, fries french, oven, manual, frying pan, irayisi kunye neyogathi. Ibandakanya ifosholo ukuvuselela ngokuzenzekelayo onokuthi upheke ngayo ngomzamo omncinci kunye nesibambo, zombini ezikhutshwayo.
Iqondo lobushushu elihlengahlengiswayo ngokweqondo ukusuka kwi-100 ukuya kwi-240º ngesibali-xesha esisebenza ukusuka kwimizuzu emi-5 ukuya kuma-90 ukupheka zonke iiresiphi ezinokwenzeka. Ibandakanya imenyu yokukwazi ukupheka iyogathi kwiqondo lobushushu obusetwe ngaphambili le-60ºC, ilungiselelwa ukusuka kwimizuzu eyi-0 ukuya kwiiyure eziyi-16.
Inokhetho lokukwazi ukupheka izitya ezimbini ngexesha elifanayo kumanqanaba amabini ngokubonga kwigridi, ukukwazi ukudibanisa amalungiselelo amaninzi ngexesha elifanayo, ukwenza ixesha elininzi. Inesitya somthamo we-3-litre kunye ne-coat ye-ceramic yamatye emithathu enokupheka ukuya kwi-3,5 kg. iitapile, ukuthintela ukutya ukuba unamathele ezantsi.
Ibandakanya incwadana yemigaqo kunye nencwadi yeresiphi ukuze ukwazi ukupheka izitya ezahlukeneyo ngendlela elula kunye neendlela zokupheka ezingama-40 zokufunda ukupheka ngesi sixhobo soguqulo kunye ne-8 yeendlela zokupheka ezongezelelweyo zevidiyo ukubona kwifomathi yevidiyo ukuba kulula kangakanani ukupheka ngale ndlela yokutya. imodeli yefryer. Inamandla e-1350 W ukupheka nasiphi na isidlo ngokufanelekileyo. Imilinganiselo ye-fryer yile: 31 x 39 x (47 cm kunye nomqheba) x 23 cm.
Ivenkile yaseCecotec Jonga isivumelwano
✅ Iimbalasane ze-4D zaseCecofry
1350 W amandla
IiNdawo ezimbini eziZimeleyo zobushushu
Ikhitshi kumanqanaba ama-2
Umhlakulo weRotary oqhawukayo
Iinkqubo ezi-8 zokuSeta kwangaphambili
I-brand yaseSpain i-Cecotec ithengisa i-fryer yomoya oshushu eyona igqibeleleyo kwaye iguquguqukayo kwimarike Kude kube ngoku. Ukukwazi kwayo uku pheka ukutya okubini ngaxeshanye, umhlakulo wakho ojikelezayo esuswayo ukuvuselela ukutya kwaye iphelele ulawulo lwedijithali.
Kodwa akuphelelanga apho Turbo Cecofry 4D nguye yedwa ineemitter ezimbini zobushushu, enye esezantsi kunye enye ephezulu, ezimeleyo kwaye inokuthi isebenze kunye okanye ngokwahlukeneyo.
▷ I-Princess oil-free fryer
Aerofryer XL ixabiso
✅ Iimpawu eziphambili zeAerofryer
Umthamo 3.2 iilitha: 4/5 Iinkonzo
Ulawulo lweDijithali ngeeNkqubo ezahlukeneyo
Ukuba ujonge imodeli nge Ixabiso elifanelekileyo lemali kufuneka uyithathele ingqalelo le fryer esempilweni. Ixabiso layo eliqhelekileyo lokuthengisa lijikeleze i-euro eyi-125 kodwa badla ngokuba nezaphulelo oko kuyibeka malunga ne-90 euros. Kukho iinguqulelo ezimbini zesixhobo ezinomahluko omncinci onokuwubona kuhlalutyo esilwenzile kwiwebhu.
Sisixhobo esineenkcukacha ezilungileyo ngokubanzi ukuba iye yamkelwa kakhulu phakathi kwabathengi, abanikezela ngovavanyo oluhle. Umthamo wayo ongaphezulu komndilili, amandla kunye nawo ulawulo lwedijithali ngeenkqubo ezahlukeneyo.
Ukuba ukhetha awuyi kuba nexhala malunga nokucoca, kuba ifanelekile ukuhlamba kwi-dishwasher. Njengoko ubona, ayiswele nto, kwaye kunye nemibono emihle yabasebenzisi yenza ukuba ime phakathi kweemodeli ezinexabiso eliphezulu kakhulu.
▷ I-Tefal Fry Deligth FX100015
Qhotsa Ixabiso lokuNyolisa
Ifriji yekhitshi enempilo eneendlela ezi-4 zokupheka: i-fry, i-grill, i-roast, i-bake kunye ne-gratin; ukunciphisa amafutha kunye namafutha ekudleni kwakho
Umthamo we-800 gr ulungele abantu aba-3 okanye abane ukuya kuthi ga kwi-4 g yeefries ezikhenkcezisiweyo ezenziwe kwi-500 min kwi-15 C kubandakanywa nexesha lokufudumala.
Kulula ukusebenzisa i-30 min isibali-xesha esilungelelanisiweyo
Ukuqhotsa okunempilo usebenzisa i-oyile encinci okanye engekhoyo xa uqhotsa, uya kupheka izitya ezinempilo nezimnandi
Konwabele ukutya kwakho okuqhotsiweyo okunempilo ngaphandle kokugcwalisa indlu ngevumba
✅ Iimpawu eziBalulekileyo Qhotsa Uyolo
800 Grs Umthamo: 2/3 Iinkonzo
Imveliso elungisekayo iminyaka eyi-10
Le fryer enempilo yenye yeemodeli ezikhoyo phakathi kwexabiso elingcono lemali. I-pvp yayo isondele kwi-euro ezili-150 kodwa eyona ixhaphakileyo kukuba inesaphulelo esikhulu kwaye malunga ne-100 euro.
Sisixhobo esilungeleleneyo esinengcaciso eyaneleyo yokwenza umsebenzi wayo ngokugqibeleleyo kwaye sifezekise ulwaneliseko lwabathengi bakho. Eyona nto iphawulekayo yayo lula ukusetyenziswa, uyilo lwakho kwaye yintoni eyakhelwe ukuhlala kunye nokukwazi ukulungiswa kwimeko yokonakala.
▷ Cecotec Cecofry Compact Rapid
Amaxabiso eFryer I-Compact Rapid
Ifryer yokutya evumela ukupheka ngepunipoon enye yeoli, ukufezekisa iziphumo eziphilileyo. Iziphumo ezibalaseleyo kuzo zonke iindlela zokupheka enkosi kwi-PerfectCook yomoya oshushu wetekhnoloji.
Ibandakanya ibhaskithi. Pheka ukuya kwi-400 grams yeefatata ngexesha elinye. Programmable ngexesha kunye nobushushu.
Ine-thermostat ukuya kuma-200 ºC. Ixesha elinokulungiswa ukusuka kwi-0 ukuya kwimizuzu engama-30.
1,5 litre umthamo wesikhongozeli.
Kubandakanya incwadi yokupheka epheleleyo.
✅ Amanqaku aPhambili aKhawulezayo
1.5 ilitha umthamo: 2 servings max
900 W amandla
I-analog thermostat kunye nesibali-xesha
Mhlawumbi kwi-aliexpress uya kufumana ixabiso eliphantsi, kodwa ukuba ufuna chitha imali encinci Kwi-Air Fryer sicebisa ukuba Cecofry Compact Rapid yi Cecotec. Ngokuqinisekileyo awuyi kugcina ngaphezulu ngokukhetha i-china kwaye kule modeli ye Inkampani yaseSpain unewaranti yeminyaka emibini.
Nangona i-brand ibhengeza i-RRP emalunga ne-75 yee-euro, ihlala inezaphulelo kwindawo yayo malunga ne-40 euro. Ngeli xabiso akukho sizathu ukuba ufuna ukupheka phantse ioli kwaye uzame iteknoloji yomoya oshushu.
▷ Zeziphi iibrendi ezilungileyo?
Okwangoku ezi ezine brand best kwi Fryers ngeoyile encinci kwikhathalogu yayo ebanzi kunye nokuba ne iimodeli ezithengiswa kakhulu eSpain.
Ukuba ufuna ukubona ezona zixhobo zibalaseleyo kunye nezinto eziphambili zenkampani nganye cofa emfanekisweni.
Philips Airfryer Oli Free Fryers
I-Cecotec Cecofry Oil Free Fryers
I-Tristar Oyile yasimahla yeFryer
Tefal Oli Free Fryers
➤ Ezinye iiFryer zoMoya eziNto eziBonisiweyo
Fikelela kuphononongo lwethu, kuzo sihlalutya ezinye iimodeli ngokweenkcukacha iboniswe kwimarike yaseSpain.
Uya kufumana i iingeniso kunye nokungalunganga, izimvo zabasebenzisi abasele bephekile kunye nabo kwaye ungathenga phi eyakho ngexabiso elingcono.
I-Vpcok Oyile yasimahla
Moulinex Easy Qhotsa Deluxe EZ401D Oli Free Fryers
I-Lidl Oyile yasimahla yeFryer
IiFryer zasimahla zeOli yeCosori
Freimatic Diet Fryer
I-Tefal Actifry Express Snacking
I-Aicok Oyile yasimahla
Yintoni i-oyile-free fryer
Iye yaba sesinye sezixhobo zekhaya eziyimpumelelo. Ngokuba Bangakwazi ukulungiselela zonke iintlobo zokupheka, nokuba yikhosi yokuqala okanye yesibini kunye needessert, kodwa ngaphandle kweoli okanye ngecephe nje layo. ç Oku kungenxa yokuba beza nobuchwepheshe obutsha obandakanyiweyo, obusekelwe kwinto yokuba iya kuba ngumoya ojikeleza kubushushu obuphezulu kunye nesantya esiphezulu. Oku kwenza ukutya kube nokugqibelela okucocekileyo esikwaziyo, kodwa ngaphandle kokongeza inani eliphezulu leoli.
➤ Sesiphi IFryer yaMahala Onokuyithenga?
I-COSORI Fryer ngaphandle ...
Isindululo sethu kukuthenga ii-Brand ezinikezela ngeNkonzo yobuGcisa eSpain, njengeTefal, Philips, Princess, Cecotec ... Gcina ukhumbule ukuba zivaliwe kwaye izixhobo ezidibeneyo zixhomekeke kumaqondo aphezulu kwaye zihlupheke kakhulu, ngoko uya kuxabisa ukuba phi. ukuyilungisa okanye apho unokuthenga khona iindawo ezisecaleni xa uzifuna. Nge-boom, ezininzi iibrendi ezimhlophe ziye zaphuma ezingenayo i-SAT kwaye umahluko wexabiso kunye nezinye iiModeli zeBrand awukho kangako.
▷ Yiyiphi onokuyikhetha? Imiba ebalulekileyo
Eyona miba ibalulekileyo Izinto ekufuneka uzigcine engqondweni xa ukhetha i-air fryer zezi:
Iimodeli ezincinci ziyathengiswa, zilungele izibini okanye abantu abangabodwa, kunye neemodeli ezinkulu kusapho lonke, ke kuya kufuneka uyithathele ingqalelo kwaye khetha umthamo ofanele iimfuno zakho.
Kukhethwa ukuba uthenge i-fryer enamandla ngaphambi kokuba ube mfutshane, njengoko iyinto enokwenza umahluko umgangatho kunye namaxesha okupheka. Kwimeko nayiphi na into, amandla aphezulu angabonakali ukuba asebenza ngakumbi, kuba kuxhomekeke kwindlela isixhobo esisebenzisa ngayo loo mandla.
✅ Ukucoca ngokulula
Yenza kube lula ukuhlamba Yinto ebaluleke ngakumbi kunokuba unokucinga ekuqaleni, ukuba ukucoca kunzima kwaye kuntsonkothile akunakuyisebenzisa ukunqanda ukudyobha.
✅ Uhlahlo lwabiwo-mali
Ixabiso lidla ngokuba yinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo kuyo nayiphi na into ethengiweyo, ngethamsanqa unawo onke amaxabiso, nakwezona mpawu zintle.
✅ Uphononongo lwabathengi
Indlela elungileyo yokufumana ilungelo lakho lokuthenga kukufunda izimvo zabathengi abasele bezamile. Zama ukufunda uphononongo kunye sukujonga nje amanqaku, idla ngokubonakalisa ngcono ubunyani.
✅ Ezinye iimpawu ezibalulekileyo
Nangona ezi zinto zingasentla zizezona zisisiseko zibalulekileyo, kukho izinto ezininzi ezinokuphucula kakhulu amava omsebenzisi kunye neziphumo zokupheka.
Amanqanaba okupheka ahlukeneyo
I-Rotating Scoop yokususwa kokutya
Seta kwangaphambili iiMenu
IiNdawo zoBushushu ezahlukeneyo
Izinto eziluncedo kwi-oyile-free fryers
Ukuba sele sikhankanyile ukuba yingcamango engaphezulu kwempumelelo, ngoku kufuneka sazi ukuba zeziphi iingenelo zayo eziphambili, eziya kuba zizo eziya kugqiba ukusoyisa:
Izitya ezinempilo kakhulu: Liyinyaniso elokuba ngamanye amaxesha, ngenxa yesantya sobomi esinabo, asiyeki ukutya ukutya okunesondlo. Oku kubangela ukuba sidle ngokukhawuleza kwaye kakubi, sithatha inxalenye enkulu yamafutha emzimbeni wethu, eya kuguqulwa ibe yikhalori. Ngoko ke, i-fryer engenawo ioli iya kufezekisa izitya ezinempilo, ukunciphisa la mafutha ngaphezu kwe-80%.
Kuya kongela ixesha ekhitshini: Iziqhoyiso ezinzulu sesinye sezona zixhobo zikhawulezayo. Oko kukuthi, kwimizuzu embalwa, siya kuba nezitya ezilungeleyo kunye nezimnandi. Ngoko kuya kukuphepha ukuchitha ixesha elininzi ekhitshini okanye ukulawula amaxesha. Ekubeni kule meko, unokwenza inkqubo efunekayo ngokuxhomekeke kukutya kunye nexesha lokupheka.
Inkcitho yamandla encinci: Yenye yezo zixhobo aziyi kusebenzisa ukukhanya okukhulu. Ngoko kule meko sinokuyithelekisa ne-oven.
Bandakanya isibali-xesha: Ungazikhathazi malunga nokutya, kuba ngesibali-xesha, uya kwaziswa xa sele silungile. Kananjalo akufanele uzikhathaze ngeqondo lobushushu kuba badla ngokuba nolawulo lobushushu.
Zilula kakhulu ukuzisebenzisa: Kuyinyani ukuba ngalo lonke ixesha sithenga isixhobo soyika ukuba kuya kuba nzima ngathi ukusisebenzisa, kodwa akunjalo. Banolawulo lwedijithali ukwenza useto oluchanekileyo.
Kulula ukucoca: Njengoko iya kuba sisixhobo esisoloko sisisebenzisa, sifuna kube lula ukusicoca kwaye sinjalo. Amalungu ayo anokususwa kwaye ahlanjwe kwi-dishwasher. Nangona ukuba ukhetha ngesandla, uya kuyenza ngesepha ethambileyo kunye nesipontshi.
Yivalelise kumavumba amabi xa upheka: Olunye uncedo olukhulu kukuba awuyi kuba nevumba elibi kangangeeyure ekhitshini lakho okanye umsi onokuvela nezinye iintlobo zezixhobo zombane.
Yiyiphi eyona nto ingcono, i-fryer ngaphandle kweoli okanye ngeoli?
Kuyinyani ukuba kukho amathandabuzo amaninzi, kodwa siya kuwasusa ngokukhawuleza. Ngenxa yokuba xa sithetha ngokubanzi siqhele okanye siqhele ama-fryers aneoli. Kodwa kuzo sineendleko zeoli ethethiweyo ukongeza kwinto yokuba siya kudla iikhalori ezininzi kwaye akusiyo into eya kusibulela impilo yethu. Ngenxa yesi sizathu, iifriji ezingenawo ioli zisempilweni kwaye zisivumela ukuba senze izitya ezingapheliyo.
Ke, kuzo zonke izibonelelo abanazo, siya kuhlala sihlala nabo, kodwa ewe, nangona iziphumo zigqibelele, kuyinyaniso ukuba. ezinye zazo azifumani siphelo sikrwada njengezo zeoyile. Ukhetha eyiphi?
Yintoni enokuyenza i-fryer enzulu ngaphandle kweoli
Qhotsa: Ngokusengqiqweni xa sithetha ngefryer enzulu, sinethemba lokupheka eqhotsiweyo. Kaloku, kule meko wayengazukushiywa ngasemva. Unokonwabela ezinye iifries zaseFransi, kunye nokutya okunesonka okunje ngecroquettes okanye steaks.. Kodwa kukuba amaqanda athosiweyo anendawo kwimenyu ye-fryer enzulu ngaphandle kweoli. Isiphumo singaphezulu kokumangalisa kwaye uya kuyithanda.
Ithowusti: Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuphela kokutya ngakunye kuya kusixelela okuninzi ngencasa yako kwaye siya kuthobela ngokungqongqo izinto esizithandayo. Ngoko ke, ukuba uyayithanda yenza ukutya kube crisme kancinci ngaphandle kodwa kunye nejusi kwaye ingaphakathi egudileyo, ngoko ungabheja kulo msebenzi kwifryer yakho ngaphandle kweoyile. Ngokomzekelo, inyama, umzekelo, iya kuba enye yezithako eziza kukubulela kakhulu.
Bhaka: Kukho amaxesha amaninzi xa sibona ukuba njani i-fryer ngaphandle kweoli ifaniswa kancinane ne-oven. Oku kungenxa yokuba ikwangumoya ojikeleza ngesantya esiphezulu ukusonga ukutya. Ngoko ke yenye yeendlela zokupheka ezidumileyo. Kodwa kungekhona kuphela kwizitya ezithile eziphambili, kodwa kunye nokwenza i-dessert.
Njenge: Irosti egqibeleleyo sele ikhona xa isiza kwifryer engenamafutha. Ukuba ucinga lungisa uluhlu lwezitya ngendlela ye-grill okanye i-barbecue, ngoko kufuneka usebenzise lo msebenzi. Kuba umphumo nawo uyamangalisa. Nangona izitya zokuqala azihlali nje kuphela kwinyama, kodwa unokukhetha kwakhona intlanzi okanye iifatata ezitshisiweyo.
Cocer: Sesitshilo ukuba ayifuni mafutha kwaye xa sipheka ukutya, akunjalo. Yenye yeendlela zokupheka ezidumileyo. Kuba imalunga ukhetho olusempilweni ngokupheleleyo kwaye yile nto siyithandayo. Ukongezelela, kukulungele ukuzinyamekela okanye ukwenza amalungiselelo okuqala. Yonke into onokuyicinga!
➤ Uphononongo lwabasebenzisi beeFryer zoMoya
Ngokuqinisekileyo unomdla wokwazi ukuba bathini abasebenzisi beefriji zomoya oshushu. Uninzi lwezimvo zilungile, nangona kukwakho nabo bangaqinisekanga.
Abasebenzisi abanganelisekanga, ubukhulu becala, bakhalaza ukuba xa uqhotsa ngeoli encinci, ukutya akuhlali kufana nokutya okuthosiweyo okuqhelekileyo. Oku kusengqiqweni, kodwa kufuneka ugcine engqondweni.
Unokufunda ezinye ze izimvo ezivela kubathengi abaqinisekisiweyo abonwabileyo, okanye uvavanyo olwenzileyo umntu otya ukutya:
“Ndiyathanda ukuba ihluze ioyile kwaye iyigcine ingangeni moya de kube lixesha elizayo. Ubushushu bubonakala bugudile kwaye bukhawuleza. Ndizamile iindlela zokupheka ezahlukeneyo kwaye iziphumo bezisoloko zilungile. Yonke into icrispy kwaye imdaka kakuhle kwaye ioyile esetyenzisiweyo ayibonakali igqithisile. "
Andizange ndibenayo i-deep fryer ngaphambili kwaye ndandithandabuza ukuba ingasebenza kakuhle kangakanani, okanye ingaba mdaka kangakanani. Le nto intle! Ndenze amaphiko ngayo. Elona candelo lihle yindlela ekulula ngayo ukugcina nokusebenzisa kwakhona ioyile. Inkqubo ikhululekile ngokupheleleyo kukungcola. Ukucoca kulula kakhulu njengoko i-fryer basket, isitya kunye nomphezulu kulula ukukususa kunye nokuhlamba.
“Esi freyi siza kusombulula nayiphi na ingxaki onayo ngokuqhotsa. Ukuzonda ukuqhotsa ngenxa yamavumba kunye nokungcola. Esi sikhenkcezisi sinzulu kulula ukusicoca njengoko sisisebenzisa kwaye sibeke kwi-dishwasher. Inxalenye yodwa engakwazi ukungena kwi-dishwasher yinxenye ye-heater, ecocwa ngokulula kwi-sink. Ukuhluzwa kweoyile kusebenza kakuhle kwaye akwenzi kungcola, ndikuqhotse ukutya okuqhotsiweyo ngokuthe ngqo kwisikhenkcisi, iitapile, inkukhu, njl.
"Kulunge kakhulu! Kudinga amava amancinci ukulungisa ixesha lokuthosa ngokugqibeleleyo.
Ayisebenzi ngokupheleleyo ngaphandle kweoyile, kodwa ingcono kuneziqhoyi ezinzulu zobomi obude.
Ndinqwenela ukuba bekukho iinketho ezininzi zokuseta amaqondo obushushu ahlukeneyo. Idijithali ibinokuba ngcono, kodwa yayisisipho esimangalisayo esivela kumfana wam, ngoko andinakukhalaza. "
▷ Izigqibo iMifreidorasinaoite
Ngokombono wethu lukhetho oluhle kulabo bafuna ukunciphisa ioli ekudleni kwakho ngaphandle kokuyeka "eqhotsiweyo" ngokupheleleyo. Kwakhona kunokuba yinto efanelekileyo yekhaya kulabo abathanda ukupheka kwi-oven, kodwa ngenzuzo yokuba ikhululekile kwaye kulula ukuyicoca.
Ukuba uyayithenga ucinga ukuba uza kuqhotyiswa ngokufanayo neemodeli eziqhelekileyo iyakuphoxaNgaphandle koko ngokuqinisekileyo uya kuvuya ngokuthenga, njengabasebenzisi abaninzi.
Ukuba awuqinisekanga ngeziphumo zokuba ukupheka ngomoya oshushu unikezela kwaye uthanda ukuqhotsa kakhulu, jonga IFryer yamanzi Movilfrit.
➤ Amaxabiso eZiqhotsi ezingaSebenzisi Ioyile
I-COSORI Fryer ngaphandle ... Bona amanqaku Izimvo eziyi-79.856 Jonga isivumelwano
I-4,5L yesiQatha seOyile ... Bona amanqaku Izimvo eziyi-158 Jonga isivumelwano
I-Aigostar Cube-Fryer... Bona amanqaku Izimvo eziyi-2.550 Jonga isivumelwano
I-Cecotec Fryer ngaphandle ... Bona amanqaku Izimvo eziyi-262 Jonga isivumelwano
I-COSORI Fryer ngaphandle ... Bona amanqaku Izimvo eziyi-11.075 Jonga isivumelwano
I-COSORI Fryer ngaphandle ... Bona amanqaku Izimvo eziyi-14.504 Jonga isivumelwano
Okona kulungileyo	I-COSORI Fryer ngaphandle ...
Umgangatho wexabiso	I-4,5L yesiQatha seOyile ...
Oyintandokazi yethu	I-Aigostar Cube-Fryer...
I-Cecotec Fryer ngaphandle ...
Amaxabiso eeFryer zoMoya eziPhantsi zeoyile ziqhelekile ngaphezulu kwemveli. Nangona kunjalo, iindidi zamaxabiso zilungile, kwaye sinokufumana iimodeli ezifikelelekayo malunga ne-50 euros, nkqu nezona zixhotyisiweyo zijikeleze i-euro ezingama-250.
Nangona i-RRP iphezulu kwezinye iimodeli, enyakeni kuhlala kukho izibonelelo ezimbalwa ezinezaphulelo ezilungileyo kuzo zonke iibrendi. Ungazibona ezona zinikezelo zibalaseleyo ngoku ngokucofa iqhosha.
IiFryers zasimahla zeOyile ngoLwesihlanu oMnyama
▷ Ngabaphi abathengisi abagqwesileyo?
Uluhlu luhlaziywa ngokuzenzekelayo rhoqo kwiiyure ezingama-24 kunye nabathengisi be-Amazon spain
I-4,5L yesiQatha seOyile ...
▷ Ungasithenga phi i-diet fryer?
Unokuthenga i-fryer yakho enempilo kwiivenkile ezibonakalayo okanye kwiivenkile ze-intanethi, apho uya kufumana iindidi ezininzi. Ewe kunjalo, uya kufumana kuphela i-silvercrest kwi-lidl, kwaye ayisoloko ikhona.
Ukuthengwa kwe-intanethi sincoma ngokucacileyo i-Amazon, eye yabangela ukuba sithenjwe thina kunye nabathengi abaninzi kwiminyaka yakutshanje. Ngokuqinisekileyo uyasazi isigebenga se-e-commerce, kodwa ukuba akunjalo, siya kukuxelela izizathu zokuba kutheni lolona khetho lungcono:
Iintlobo ezininzi zeempawu kunye neemodeli
Amaxabiso amahle kunye nezibonelelo eziqhubekayo
Ukuthunyelwa ngokukhawuleza kunye nexabiso eliphantsi
Iwaranti esemthethweni yeminyaka emibini
Izimvo zabanye abathengi
Kodwa kukho iindawo ezininzi zokuthenga i-oyile engenaxabiso eliphantsi:
Amazon: Njengoko sisazi kakuhle, isigebenga sokuthengisa kwi-intanethi sinazo zonke iintlobo zeziqhoyiso ezingenaoyile. Ngoko sinokufumana iimodeli ezahlukeneyo, iimpawu kunye nayo yonke into oyifunayo kwiimfuno zakho zemihla ngemihla. Ke ngoko, phakathi kokwahluka okungaka, kuyinyani ukuba amaxabiso nawo anokwahluka, okonga incinci elungileyo ekuthengeni kwakho.
Inkundla YesiNgesi: Iibrendi ezinkulu zikwadibana e-El Corte Inglés. Ke siza kufumana eyona modeli isisiseko, kodwa kunye namaxesha athile athengiswa kakhulu ngokobungakanani okanye iindaba. Ngokuphathelele amaxabiso, unokufumana isaphulelo kunomnye, kuxhomekeke kwiimodeli.
I-Lidl: I Ivenkile enkulu yaseLidl Iyasimangalisa kwinqanaba ngalinye. Kuba isixhobo esifana nesi sikwavela kwikhathalogu yabo amaxesha ngamaxesha. I-air fryer esisondezayo inayo yonke into esiyidingayo ukusivumela ukuba sithathwe yiyo. Ixabiso eliphantsi ngenene kwaye kulula ukuyisebenzisa. Kodwa akusiyo imodeli yayo kuphela kodwa ibonise enye imodeli yomoya oshushu, kunye neenketho ze-9 kwi-1. Iinketho ezimbini ezigqibeleleyo zokukwazi ukuzilungisa kwiimfuno zethu.
Carrefour: Kule meko, olona khetho lubalaseleyo lukwangowokuba uya kuzifumana. Ifryer engenawoyile yenye yezona zixhobo zithengiswa kakhulu kwiwebhusayithi yayo kwaye ukongeza, unokukonwabela izaphulelo kwiibrendi ezaziwayo-kakuhle. Ukusuka kwiimodeli ezixineneyo ukuya kwezinye ezinobubanzi be-oveni. Amaxabiso aya kwahluka kuzo zonke kodwa usezakufumana iinketho ezifikelelekayo.
ICecotec: Uphawu lweCecotec lukhule kancinci kancinci. I-niche yenziwe phakathi kwezona ziceliwe kakhulu, ngenxa yeemveliso zabo zineteknoloji ephumelele kakhulu. Ngoko ke, kumba wee-fryers ngaphandle kweoli babengayi kushiywa ngasemva. Ngena nje kwiwebhusayithi yayo ungabona yonke into ekunika yona, kuluhlu olubanzi lweemveliso kwaye kungekhona kuphela ekhitshinia, kodwa yekhaya ngokubanzi kunye nakukhathalelo lwakho lobuqu. Kodwa kusekho okungaphezulu, kuba ikwabonelela ngokhetho lweeresiphi. Yintoni enye esinokuyicela?
MediamarktI-Mediamarkt ikwabonelela ngemodeli esebenzayo kakhulu. Ngaphezu kwakho konke, isekelwe kwiimpawu ezaziwayo-kakuhle kwaye zine Ixabiso elifanelekileyo lemali. Unokukhetha imodeli esisiseko ngakumbi okanye enomsebenzi wayo we-oveni. Zombini ziphucula ukupheka kwakho okunempilo kwaye zikuncede imihla ngemihla.
Cofa ukukala olungeno!
(Iivoti: 7 Umyinge: 3.3)
Ngaba ujonge ifryer engabizi ngeoyile ngexabiso eliphantsi? Sixelele ukuba ufuna ukusebenzisa malini
kwaye sikubonisa olona khetho lungcono
* Shenxisa isilayida ukwahlula ixabiso
⭐ I-Oli yasimahla yeFryer
Amagqabantshintshi angama-81 kwi "Fryer ngaphandle kweOli: Iimbono kunye nokuba yeyiphi enokuThengwa"
19/08/2019 ngo-01: 49
Imbiza yam inengxaki xa kudlula umzuzu indinika uE1 ithetha ukuthini lento
21/08/2019 ngo-08: 51
Mholweni. Ndiyaxolisa ukukuxelela ukuba ngaphandle kokwazi imodeli akunakwenzeka. Ngokuqhelekileyo i-E1 ithetha impazamo enye kwaye ichazwe kwincwadana kwicandelo leempazamo eziqhelekileyo. Amathamsanqa
09/07/2020 ngo-17: 02
Ndiyathanda iifries zaseFransi, ibhekoni, inkukhu kunye nemifuno ethosiweyo, kodwa ngenxa yezizathu zempilo, unqande ioli eninzi, kwaye ke, ukhetho lwe-oyile-free fryer, iluncedo, olusebenzayo kunye nolunye usuku lokupheka ekhaya.
Ukongeza, kulula ukucoceka kunye nokugcina ixesha, sipheka ikhosi yokuqala kwi-vitro kunye neyesibini kwi-fryer yomoya.
Yintoni evakala kakuhle? Ewe, ungcono uyazi.
09/07/2020 ngo-17: 04
Ivakala ilungile kwaye ngokuqinisekileyo incasa ngcono, haha. Enkosi ngokuthatha inxaxheba. Ndiyabulisa
09/07/2020 ngo-17: 33
Nam ndiyabathanda, kodwa ukutya kwam kuyandinqanda, kwaye ngaphezulu konyaka omnye ndingatyi ukutya okuqhotsiweyo. ???? Nawaphi na amacebiso ngefryer engenaoyile? Enkosi
09/07/2020 ngo-17: 38
Molo Ana.Uneendlela ezininzi ongakhetha kuzo kwiwebhu. Ukuba uhlahlo lwabiwo-mali lulungile sincoma i-Tefal kwaye ukuba iqinile inkosazana okanye i-moulinex kwi-drawer kunye ne-cecotec ene-paddle eshukumisayo kunye nezinye iimpawu. Ndiyabulisa
09/07/2020 ngo-17: 51
I-Tefal okanye i-COSORI?
Inzuzo kunye nexabiso
09/07/2020 ngo-20: 58
I-Cosori ineemveliso ezilungileyo kwaye lolona khetho lungcono ukuba ukhetha iimodeli zedrowa. Ingxaki kukuba okwangoku akukho Sat eSpain. Inketho enhle nayo i-Tristar, eyeqela elifanayo neNkosazana, evela eNetherlands. Ndiyabulisa
18/07/2020 ngo-21: 49
Ukutya endikuthandayo ukwenza kwi-deep fryer yiskwidi
13/07/2020 ngo-15: 08
Isitya sam esiqhotsiweyo endisithandayo ziifries zaseFransi.
14/07/2020 ngo-12: 28
Isitya endisithandayo sokuqhotsa ziicroquettes.
15/07/2020 ngo-20: 10
Isitya endisithandayo ngamakhonkco etswele kunye neentonga zehake. Oh kunye neenuggets zenkukhu.
Ndingathanda ukuba nefryer enzulu kangaka ukupheka okunempilo kwaye kulula.
UClara de las Heras
16/07/2020 ngo-09: 01
Isitya endisithandayo esiqhotsiweyo ziicod fritters
17/07/2020 ngo-11: 04
Iinkuni zenkukhu eziqholiweyo. Neziqhamo ezomisiweyo. Ndiye ndafunda isikhenkcisi somoya esinokuba nalo msebenzi
20/07/2020 ngo-00: 10
Ndingathanda ukupheka inkukhu enempilo kunye neetships!
11/08/2020 ngo-13: 34
Eyona nto iqhotsiweyo yimifuno ekwi tempura.
J. Carlos Iglesias Herranz
20/07/2020 ngo-11: 46
Isitya sam endisithandayo kwi-fryer yinkukhu kwaye ngakumbi amaphiko.
20/07/2020 ngo-11: 57
Ezinye i-chopitos okanye i-lace ethile.
30/07/2020 ngo-19: 36
Bendingadinwa kukutya iitequeños ezimnandi ezigalelwe itshizi (ziqhelekile eVenezuela kwaye ziqhotyiswe), ukuba ndiphumelele ifryer ndiyakumema ukuba uzitye ekhaya.
31/07/2020 ngo-10: 58
Haha, oko kunokuthathwa njengokunyoba. amathamsanqa
20/07/2020 ngo-12: 09
Mholweni!! Isitya sam esiqhotsiweyo endisithandayo: iitapile, iipepile zepadrón, ii-anchovies, imigqomo yenkukhu, amaphiko enkukhu ... Ndiyazithanda eziqhotsiweyo!
20/07/2020 ngo-21: 28
Isidlo sam endisithandayo ziifrinzi zaseFransi
23/07/2020 ngo-10: 16
Isitya endisithandayo ngamaphiko enkukhu eqhotsiweyo kunye nefries.
UMa. Dolores P.
23/07/2020 ngo-16: 08
Imigqomo yenkukhu imnandi.
23/07/2020 ngo-16: 11
Eyona nto ndiyithanda kakhulu ngamabele osiwe, kunye neetapile eziqhotsiweyo ngaphandle kokuba zifakwe kakhulu kwioli.
24/07/2020 ngo-18: 16
Encarnacion Viera Rodríguez
27/07/2020 ngo-03: 27
Indlela emnandi ngayo i-fries kunye ne-croquettes yaseFransi kwaye ukuba phezulu zenziwe ngaphandle kwamafutha, zityebile.
29/07/2020 ngo-18: 10
Kunzima ukukhetha eqhotsiweyo oyithandayo, kodwa ndiyawathanda amaphiko enkukhu ashwabeneyo kwaye anejusi ngaphakathi. Ahhhhhhmmmmmm
29/07/2020 ngo-18: 43
Ezinye iitapile eziqhotsiweyo kunye namaqanda kunye ne-ham, kunye namaqanda kunye ne-chorizo, kunye namaqanda kunye ne-pudding emnyama; masithathe iitapilesssssssssss… ..uyonwabile !!!!
29/07/2020 ngo-19: 04
Iicroquettes ziklasi yokuqala, zimnandi !!!
30/07/2020 ngo-10: 53
Ndiyawathanda amaphiko enkukhu efryer engenawoli kunye neefries. Imnandi !!! Inkukhu enemifuno, i-croquettes, njl njl. nazo zilungile kakhulu. Makhe sibone ukuba kukho ithamsanqa kwaye ndiyifumene, eyam ayihambi kakuhle kwaye ngenye yezi ntsuku iyeka ukusebenza.
30/07/2020 ngo-10: 54
Ewe, ithamsanqa. Ndiyabulisa
30/07/2020 ngo-17: 47
Isitya sam esiqhotsiweyo endisithandayo ziitapile eziqhotsiweyo ezinamaqanda.
30/07/2020 ngo-14: 13
Ewe, kum i-silver crest fryer bubunewunewu ngexabiso elilungileyo
Umhlobo wam unayo kwaye ndiyithandile
30/07/2020 ngo-14: 18
Imodeli yamva nje igqibelele kakhulu, ingxaki kukufumaneka njengoko ithengisa kwangoko. Kwiwebhu sineendlela ezilungileyo ngokulinganayo okanye ezingcono, kunye nemodeli efanayo kanye. Inhlanhla ngokuthenga.
30/07/2020 ngo-16: 44
Isitya endisithandayo… Iimbambo zeBBQ kunye nequesadillas?
30/07/2020 ngo-16: 58
Imnandi kakhulu kodwa ayiqhotswanga, haha. Amathamsanqa
UKHOLO YENDALO yeenqanawa
30/07/2020 ngo-17: 09
Molo, ndiyayithanda i-ham kunye ne-egg fries, yum yum
30/07/2020 ngo-17: 39
30/07/2020 ngo-17: 41
IMilanesas eneepepile eziqhotsiweyo kunye neetapile sesona sitya sam esiqhotsiweyo endisithandayo.
30/07/2020 ngo-17: 42
I-omelette yezambane kunye nenkukhu ethosiweyo, imnandi! Kwaye ngakumbi ehlotyeni ukuthatha ipikiniki.
30/07/2020 ngo-22: 05
Molweni nonke. Isitya endisithandayo yiskewers. Kule meko, ndiqinisekile ukuba ndiyathanda i-zucchini kunye ne-aubergine kuba ziyimveliso ezimbini endizidla rhoqo nomfazi wam.
Ndithenge ifryer namhlanje ekuseni, ndivuke kwakusasa ndafola. Ukuba uhamba iyure emva koko, akusekho nenye ...
Umbuliso onobubele. URobert
30/07/2020 ngo-22: 51
Isitya sam endisithandayo yi-longanza kunye nepepper kunye nefries yaseFransi.
30/07/2020 ngo-23: 57
Isitya sam endisithandayo ngaphandle kwamathandabuzo… amaFrentshi aqhotsiweyo….
31/07/2020 ngo-10: 24
isalmon endiyithandayo ngeefries
01/08/2020 ngo-05: 11
Ukutya endikuthandayo okuqhotsiweyo ngamaqanda, i-chorizo ​​​​kunye neefries zaseFransi. Nangona akufanele ityiwe rhoqo. ?
01/08/2020 ngo-17: 15
Sihlala sisitya inyama yenkukhu egayiweyo kunye neresiphi ye "Pilopi" kunye neetapile wedges. Abantwana bayaphambana ngabo ... Kodwa mna nomyeni wam kufuneka sitye kancinci i-XDD enamafutha kwaye besicinga ngokuthenga i-oyile fryer okwethutyana kodwa asiqinisekanga ukuba basebenza njani ...
UMaria Jose Paredes Luengo
04/08/2020 ngo-08: 57
Isitya endisithandayo ziiaubergines eziqhotsiweyo.
04/08/2020 ngo-10: 24
Ndonwabile, ngoku ndiza kunika umama enye, iresiphi endiyithandayo yinkukhu ende enongiwe ngokuthanda kwam, kunye nekeyiki yesiponji selamuni.
04/08/2020 ngo-10: 42
Isitya sam endisithandayo yi-croquettes, nokuba yintoni na. Bayandilahla...
04/08/2020 ngo-19: 37
Ndinezimbini, idrowa kunye neround enye evela eTefal kwaye ndonwabe kakhulu ngazo zombini kwaye ndikhangela enye yekhaya lam lesibini.
05/08/2020 ngo-00: 06
Isitya sam esiqhotsiweyo endisithandayo yicalamari a la Romana.
05/08/2020 ngo-04: 56
Endizithandayo kwiDish Nuggets yenkukhu
05/08/2020 ngo-23: 52
Isitya sam endisithandayo yifries yaseFransi eneepepile.
07/08/2020 ngo-12: 06
Ngokuqinisekileyo kwaye ngaphandle kwamathandabuzo ... ii-croquettes.
08/08/2020 ngo-09: 08
I-Croquettes kunye neentonga zeentlanzi ziphuma kakuhle. Uyayiphepha ioli. Kwaye neebhiskithi nazo ziphuma kakuhle kakhulu. Kodwa isono ukuyithatha kancinci.
ULuis Miguel Pérez Carrillo
08/08/2020 ngo-10: 33
Izitya endizithandayo yinkukhu yegalikhi, iifries zaseFransi kunye ne-aubergines.
UFatima Garcia Sanchez
08/08/2020 ngo-12: 13
Isitya endisithandayo yinkukhu eqhotsiweyo kakhulu
Elena Teba Montes
08/08/2020 ngo-14: 51
Iresiphi yam endiyithandayo ilula kakhulu: Fries French !!
UMONICA PASCUAL UYONWABELE
08/08/2020 ngo-20: 15
Isitya sam endisithandayo ngaphandle kwamathandabuzo yinkukhu, simnandi !!
08/08/2020 ngo-22: 41
Esona sidlo ndisithandayo ziicroquette ezenziwa ngumakhulu wam
08/08/2020 ngo-23: 17
Ndingathanda ukuzama iiprawn ngegabardine, iskwidi a la romana, iianchovies ezifakwe emanzini, kunye…. Bekuya kuba mnandi ukuba ndikwazi ukuzitya ndingacinganga ukuba zizondityebisa ngantoni?
09/08/2020 ngo-00: 01
Isitya sam esiqhotsiweyo endisithandayo ngamaphiko enkukhu anefries.
09/08/2020 ngo-01: 03
Eyona nto ndithanda ukuyenza ngamaphiko enkukhu anepepile eqhotsiweyo, amnandi !!!
10/08/2020 ngo-17: 15
10/08/2020 ngo-18: 27
Molo, esona sitya sam ndisithandayo yinyama yenkukhu.
10/08/2020 ngo-18: 34
I-NUGGET KUNYE NEFRENCH FRIES, ukutya okuthandayo kwiidemon zam ezimbini ezincinci
UBlanca uEsther Díaz Muñoz
11/08/2020 ngo-12: 26
Iifries zaseFransi ngaphandle kweoli, zimnandi kangakanani kwaye zincinci kangakanani ukutyeba !!!!!
11/08/2020 ngo-15: 23
Inkukhu enesonka kunye neefries zaseFransi.
11/08/2020 ngo-15: 24
11/08/2020 ngo-18: 47
Iresiphi yam endiyithandayo yimifuno ekrwada, i-snacks eyomileyo ye-chickpea kwaye, ewe, i-bacon cheese fries e-DIVINE.
12/08/2020 ngo-09: 57
Eyona nto iqhotsiweyo yiitapile; kodwa iitapile ezingenamafutha kodwa zi-crunchis!
12/08/2020 ngo-16: 57
Isitya sam endisithandayo yiFries kunye namaphiko aseFransi, ndinqwenela ukuba
12/08/2020 ngo-17: 27
Ndiyazithanda iitapile kunye neecroquettes
12/08/2020 ngo-18: 05
Isitya sam endisithandayo esisikiweyo iisoseji eziqhotsiweyo zikrisimesi kwaye azinamafutha
12/08/2020 ngo-18: 44
Izitya zam imifuno ngaphandle kweoli kunye ne-baked bass yolwandle
12/08/2020 ngo-19: 45
Isitya sam endisithandayo ngokungathandabuzekiyo kuko konke ukutya okungenamsoco, ngenxa ye-oyile-free fryer ungatya oko kutya ngendlela enempilo.
12/08/2020 ngo-21: 57
Isitya sam endisithandayo asikho okokuqala kodwa yile nto uyifumanayo, iifries zaseFransi, haha. Jonga ukuba ndingazenza simahla kwifryer engenaoyile. Ndiyabulisa
13/08/2020 ngo-12: 06
Isitya sam endisithandayo, inkukhu kwi-curry sauce, kunye namazambane kunye netswele.
14/08/2020 ngo-21: 06
Ndiyazithanda iinuggets zasekhaya.
09/01/2021 ngo-19: 54
Inqaku elihle kakhulu, enkosi ngoncedo !!
Black Friday Oyile Free Deep Fryers
Iifryiri zasimahla zeCyber'm ngoMvulo
Copyright 2022 Shipping 24h - Isiqinisekiso esisemthethweni - Intlawulo elula